रोचक – Page 29 – mero sathi tv
अब केपी ओलीलाई सडकमा ल्याएर देखाउछु भन्दै जंगिए यी केपी खनाल (एक पटक हेर्नुहोस)
१६ माघ २०७४, मंगलवार १४:३० January 30, 2018
LeaveaComment on अब केपी ओलीलाई सडकमा ल्याएर देखाउछु भन्दै जंगिए यी केपी खनाल (एक पटक हेर्नुहोस)
केहि समय अगाडी मात्रै भएको यो सरसफाई अभियान हो जहाँ अछामका एक ठिटो केपी खनालको अभियानमा हजारौ युवाहरु सडकमा आएर क्लिन काठमाण्डौ अभियान सुरु गरेका थिए सफल भए संगै उनि मिडिया मार्फत अब बिभिन्न नेता देखि लिएर नगरपालिका र अन्य समग्र नेपाली मिलेर अगाडी बढ्ने अभियानलाई अगाडी बढाउने बाचा गरेका छन हेरौ भिडियो :
संसारभरिकै महँगो(करोड भन्दा बढी पर्ने) बाईक चढ्ने यी हुन् सौरबको घरनै बाईक बाईक रुम -हेर्नुहोस
१६ माघ २०७४, मंगलवार १४:०६ January 30, 2018
LeaveaComment on संसारभरिकै महँगो(करोड भन्दा बढी पर्ने) बाईक चढ्ने यी हुन् सौरबको घरनै बाईक बाईक रुम -हेर्नुहोस
दर्जनौं मोडलका बाइक छन् युवा उद्यमी सौरभ ज्योतिका । ती सबै बाइकलाई राखेर उनी म्यूजियम बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ, भिडियो रिपोर्ट –
यी ४ ठाउँमा कोठी भएका मानिसहरु निकै भाग्यमानी हुन्छन
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०८:५० January 30, 2018
LeaveaComment on यी ४ ठाउँमा कोठी भएका मानिसहरु निकै भाग्यमानी हुन्छन
मान्छेको शरिरमा हुने कोठिले पनि उसको भाग्य बताउने ज्योतिष विज्ञानले बताउने गरेको छ । तपाई सबैमा कहिँ न कहिँ कोठि हुन्छ तर ती सबै सुभ हुदैनन् । कतिपयले त आफुलाई सुन्दर देखाउन आफै कृतिम कोठि पनि बनाउछन् । त्यो भन्दा पनि शरिरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा हुने कोठिहरुले कस्तो संकेत गर्छ त ? ज्योतिष विज्ञानको […]
विवाहपछि पहिलोपटक स्टेजमा नाचिन् अनुश्का
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०७:४५ January 30, 2018
LeaveaComment on विवाहपछि पहिलोपटक स्टेजमा नाचिन् अनुश्का
केही दिनअघि बिराट कोहलीसाग बिहे गरेकी बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अनुश्का शर्मा हालै मुम्बईमा ठुम्का नाच्दै गरेको भेटिइन् । विवाहपछि उनी पहिलोपटक स्टेजमा प्रस्तुत भएकी हुन् । मुम्बईमा आयोजित इन्टरनेसनल कस्टम्स डेको अवसरमा आयाजित कार्यक्रममा उनलाई आलिया भट्टले साथ दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा अनुश्का पहेालो रंगको कुर्ता-सुरुवालमा थिइन् भने आलिया प्रिन्टेड ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट गाउनमा […]
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०५:१५ January 30, 2018
LeaveaComment on बुवाको ज्यान गयो बिदेशमा ,आमा अर्को सित, बिचल्लीमा हामि भएपानी खुशी हुनु है आमा ! मन थामेर पढ्नुहोला
राम्रो सँग पढनु है’ फोनमा भनेका यो आवाज बाहेक बुवाका बारेमा केही याद छैन रामेछापको रामपुरकी सन्जु तामाङलाई । सानैमा विदेश गएका बुवाको अनुहार पनि सम्झनामा छैन ।आकाशमा उडिरहेको हवाइजहाज आँखाले भ्याउन्जेल हेर्नुहुन्छ । साउदी गएका बुवा त्यही जहाजमा फर्केको कल्पना गर्नुहुन्छ । सन्जुले हवाइजहाज हेर्दै बुवा कुरेको ९ वर्ष भैसक्यो । मनमा बुवा नर्फकने […]
आमा बनेपछि हेर्नूस् राजेश हमालकी ‘दुलही’
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०५:०८ January 30, 2018
LeaveaComment on आमा बनेपछि हेर्नूस् राजेश हमालकी ‘दुलही’
सुमिना घिमिरे, यो नाम नेपाली दर्शकहरुका लागि अपरिचित होइन । दर्जन बढी सिनेमामा काम गरिसकेकी नायिका सुमिना घिमिरे अहिले नेपाली फिल्मबाट निकै टाढा छिन् र उनले कहिले पनि फिल्ममा नफर्किने घोषणा समेत गरिसकेकी छिन् । विमान चालक रोशन सापकोटासँग विवाह गरेपछि अहिले उनी घरगृहस्थीमै व्यस्त छिन् । लामो समयको प्रेमसम्बन्धलाई सुमिना र रोशनले बर्ष २०७१ […]
१६ माघ २०७४, मंगलवार ०५:०४ January 30, 2018
LeaveaComment on यी १२ पाप गर्नु भएको छ ? तपाँईलाई कहिल्यै क्षमा मिल्दैन र जीवनभर सुख प्राप्ति हुदैन !
सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउ‘दैनन् । मन्दिरमा गएर निर्जीव मूर्तिलाई फूलपाती अक्षता भेटी चढाई ढोग दिनुलाई धर्म भन्छन् भने मन्दिरमा पूजा नगर्नुलाई पाप भन्छन् । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैले धेरै थोरै पाप गरेकै छन् कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि त कसैले अन्जानमा । […]
पेट मिची मिची हास्नुहोस्,सबै भन्दा बबाल कमेडी भिडीयो
२५ पुष २०७४, मंगलवार ०७:४९ January 9, 2018
LeaveaComment on पेट मिची मिची हास्नुहोस्,सबै भन्दा बबाल कमेडी भिडीयो
२० पुष २०७४, बिहीबार १६:२१ January 5, 2018
LeaveaComment on अमेरिकन, वैज्ञानिकले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचारको फल पत्ता लगाए, जुन फल नेपालमा मात्रै पाईने !!
संसारका करोडौं मानिसहरु क्यान्सरबाट पीडित छन् । क्यान्सर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक रोग हो । तर रुसी वैज्ञानिक ह्रिस्टो मेर्मेर्सकीले क्यान्सरको प्राकृतिक उपचार पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । रुसका वैज्ञानिक ह्रिस्टोले घरमै बनाउन सकिने यस्तो औषधी पत्ता लगाएका छन्, जसको प्रयोगले विभिन्न प्रकारका प्राणघातक क्यान्सर रोगबाट बचाउन सन्छ । औषधी तयार बनाउन चाहिने सामग्री ४०० […]
यसरी थाहाँ हुन्छ कुनै युवती विवाहित हुन् कि हैनन् ?
२० पुष २०७४, बिहीबार ०९:५९ January 5, 2018
LeaveaComment on यसरी थाहाँ हुन्छ कुनै युवती विवाहित हुन् कि हैनन् ?
प्राय सबै केटा मान्छेको चाहना हुन्छ, राम्री युवतीसँग प्रेम गर्ने र सम्बन्ध अगाडी बढाउने । कुनै सार्वजनिक समारोहमा राम्री युवती देख्दा नै केटाहरुको मनमा ‘प्रेमको लड्डु’ फुटिहाल्छन् । तर सबैलाई असजिलो लाग्ने विषय भनेको के हो भने, सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी सुन्दर युवती विवाहित हुन् कि अविवाहित ? किनकी अहिलेको जमानामा विवाहित सबै युवतीले सिरमा सिन्दुर […]